SpaceX yatove nemasaiti akakwana ekumisikidza ruzhinji beta | Linux Vakapindwa muropa
Mushure mekuedza kusati kwakunda kuvhura nekuda kwekushata kwemamiriro ekunze uye mamwe matambudziko, SpaceX yakazoparura yayo yegumi nembiri Starlink mishoni kubva kuKennedy Space Center muFlorida.
SpaceX yakabudirira kuvhura imwe batch yemakumi matanhatu ema satellite neChipiri, kuunza huwandu hwesatellite yeStlinklink mukutenderera kusvika kune mazana manomwe. Musk, mukuru weSpaceX, akati izvo zvakaringana "yakakura zvakakwana" yeruzhinji beta.
Starlink yekupedzisira chinangwa ndechekuisa 42.000 satellites, kusanganisira zviuru gumi nezviviri zvatobvumidzwa neFCC, mukutenderera pamusoro pePasi, inokwanisa kuendesa Internet inomhanya kunzvimbo dziri kure uko kunonetsa kuwana.
Starlink inotaura pane webhusaiti yayo kuti Inoda kufukidzwa muUnited States neCanada pakupera kwa2020 uye "padhuze kufukidzwa kwepasirese" na2021.
Iyi yeruzhinji beta vhezheni yaizosanganisira iyo Detroit metropolitan nzvimbo uye Ann Arbor, MichiganMusk akapindura, achipindura mubvunzo pa Twitter. Asi Musk haana kutaura chaizvo nguva iyo diki maStelllink satellites aitarisirwa kusvika kune yavo "tarisiro nzvimbo."
Musk akataura muna Kubvumbi kuti chikamu chebeta cheveruzhinji chebasa ichi chichaitika mukudonha kwa 2020. Akatizve muna Chivabvu 2019 kuti vhezheni inoshanda "yekutanga" yekutengesa yeStarlink sevhisi yeUnited States inogona kuitwa nemasaiti mazana mana, nepo mazana 400 vaizove vanokwana kuita "zvine musoro" kufukidzwa kwepasirese, maererano neBusiness Insider.
Nguva Musk haana kudoma zuva rekuuya kweyekupedzisira orbit mishoni, Astrophysicist Jonathan McDowell weHarvard-Smithsonian Center yeAstrophysics akataura mune chirevo kuti maseteti ekumashure anogona kunge asingawanikwe kusvika Kukadzi 2021. McDowell anoteedzera kutenderera kwema satellite eS Starlink uye anopa zvinyorwa pawebhusaiti yake.
Pakazara, sekureva kweaophysophysicist, SpaceX inoparadzanisa batch imwe neimwe yemakumi matanhatu emasatellite mumapoka matatu e60.
“Boka rekutanga richasvika pakakwirira pakatarwa mukati memazuva makumi mana nemashanu; wechipiri newechitatu mushure memazuva anenge makumi mapfumbamwe nemakumi matatu nemashanu, "akadaro. Naizvozvo, zvinogoneka, maererano nezvakafanotaurwa kubva kuMcDowell, iyo iyo yeruzhinji beta vhezheni inovhura pamwe neyekupedzisira 60 satellites akaendeswa mumwedzi mishoma inotevera.
Starlink yanga ichishanda yakavanzika beta kubva muna Chikunguru mune mamwe matunhu ekuchamhembe kweUnited States uye, kunyangwe ichifukidza kumaodzanyemba kweCanada, masevhisi akamirira mvumo yekutonga.
Zvisinei, iyo yakavanzika beta yeiyo tekinoroji yaive yakaganhurirwa kune vashandi veSpaceX, mauto nema emergency services muWashington state.
Zvinoenderana neshumo rakaburitswa neCNBC mukupera kwaGunyana, Washington State Army Emergency Management Unit yanga ichishandisa zviteshi zvinomwe Starlink yekupedzisira-mushandisi network yekubatanidza kubvira kutanga kwaNyamavhuvhu mumatunhu akaparadzwa nemoto ehurumende.
Muchidimbu chakatumirwa mushure mekutanga kweChipiri, SpaceX yakati nzira iyo Washington yekutanga vapindura vakaendesa Starlink muMalden, kumaodzanyemba kweSpokane muWashington, "inomiririra mashandiro anoita Starlink zvakanyanya: munzvimbo dziri kure kana dzekumaruwa uko kusabatika kweInternet".
Iyo "yakasarudzika yakakura yeruzhinji beta" vhezheni zvakavimbiswa naMusk Izvo hazvifukidze iyo yose United States, asi ichafukidza zvimwe zvekuchamhembe kwenyika. Chikamu ichi chinoreva kuti vamwe vangangoita vatengi veStarlink, vasina kugutsikana nekubatana kwakawanda kwemasevhisi kuburikidza nesataneti dzetsika uye vanotsiva nharembozha, vachave nemukana wekuyedza SpaceX's Starlink sevhisi.
SpaceX nguva pfupi yadarika yakaunza iyo FCC's Starlink Internet performance test, iyo inoratidza kuti inokwanisa kurodha kumhanya kwe102-103 Mbps, kurodha kumhanya kwe40,5 Mbps kusvika 42 Mbps, uye latency ye18 kusvika 19 milliseconds.
Kunyangwe zvimwe zvakazvimirira zvechitatu bvunzo zvakaratidza kushomeka kuita.
Zvisinei, SpaceX ichine mamwe matambudziko, kusanganisira kuwedzera kumhanyisa mhanyisa kwekupedzisira-mushandisi zviteshi.
Rimwe dambudziko ndere dambudziko rekusvibiswa kwechiedza, iro rakawedzera nekukurumidza neasingaenzaniswi mwero wekuendeswa kwemadiki maStelllink satellites.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » SpaceX yatove nemasaiti akakwana ekutanga yayo yeruzhinji beta